Vemumapato Companies - Ningbo Nide Mechanical Co., Ltd
Armature Insulation bepa kuisa Machine
Wedge kuisa Machine
Armature ichitenderera Machine
Mugodhi kudzvanya Machine
End pabutiro kudzvanya muchina
Commutator kudzvanya Machine
Commutator gwapa nomoto Machine
Armature vakadengezera Machine
Armature upfu bemhapemha Machine
Armature yokuedzwa Machine
Aluminum ufe Kudzingwa Machine
Stator kugadzirwa Machine
Stator kuputira bepa kuisa Machine
Tsono ichitenderera Machine
Stator ichitenderera Machine
Stator ichitenderera kuisa muchina
Middle vanoumba Machine
Final vanoumba Machine
Stator upfu bemhapemha Machine
Stator yokuedzwa Panel
Nide yave kutevera makambani vemumapato
Zvayaiva pana Hi-Tech District muna Ningbo muguta maindasitiri nomusimboti China, uye akatora mukana simba hwokugadzira uye vezvokutengeserana chikwata, Ningbo Nide Mechanical midziyo Co., Ltd inotaurawo R & D, yokutengesa & Sales, unhu kuzvidzora uye pashure basa michina izvo zvinoberekwa kwayo vemumapato mafekitari (Jiangsu Nide kushandisa michina Tech Co., Ltd uye Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd.
Kunze michina chivako imba, dzinodzorwa rayo yepamusoro uye basa gadziriro, Nide zvokuimba anopawo vamwe hwebetsero michina outsourced kubva imwe nyanzvi vagadziri kuti makasitoma ayo. Chinangwa ndechokuti kuderedza vatengi zvimwe basa uye makasunungurwa kubva kunetseka yepamusoro nyaya.
Nide ane mahofisi kuIndia, Brazil, Korea, Turkey, uye Argentina, rokutengesa zvakanaka uye basa mambure basa achititadzisa kuwana uye kupa basa kuti vatengi pamusoro nyika nyore uye nokukurumidza. Kuvimbika, basa uye nokukurumidza maitiro rubatsiro Nide kuwana chivimbo yose vatengi 'seccesively, saka kure Nide ave kusvitsa zvigadzirwa kuti vatengi ayo nyika dzinopfuura 40 akadai Germany, Italy, Spain, France, Turkey, India, Brazil, Vietnam, Mexico, Agentina, USA, etc., vatengi vazhinji ndivo vaitungamirira mumwe mumunda wayo.
zvido zvedu zviri kupa vatengi yedu optimized zvizere remidzanga kupedza motokari mukugadzira.
2.Jiangsu Nide kushandisa michina Tech Co., Ltd
Iri Suzhou, kufukidza workshop kunharaunda 9.000 mativi metres, pamwe 102 mushandi, Jiansu Nide kushandisa michina-Tech Co., Ltd kazhinji kugadzira kumira pamwe muchina uye zvakazara kwangoitwa mutsetse nokuda induction injini stator, BLDC injini ichitenderera muchina, zvokunze rotor kugadzirwa michina rotor gungano mutsetse, gwenya gungano mutsetse nezvimwe customized muchina kana kugadzirwa mutsetse.
The zvigadzirwa vari ainyanya kureva kuti kuroorwa uye zvitatu danho induction injini, mvura pombi injini, wokuwachisa injini, mhepo ezvinhu injini, dzinoshandisa injini, tsonyera injini, yemagetsi bhasikoro injini, BLDC injini, servo injini, yemagetsi motokari injini, etc. vamwe vedu zvigadzirwa vari CE vanotenderwa.
Kunyatsoteerera pakutevedzera ISO 9001system, vakagadzirira pamwe mukuru nemazvo machine Zvivako, isu nechokwadi zvinhu zvedu kusangana chii vatengi 'chaiwo zvinodiwa.
3.Zhejiang Nide Intelligent kushandisa michina Co., Ltd
Zhejiang Nide Intelligent kushandisa michina Co., Ltd, iyo chose-vaiva ne Ningbo Nide Mechanical Equipment Co., Ltd, agere maindasitiri nomusimboti guta Ningbo, kunyanya kufunga azvino ichitenderera uye ungano michina nokuda ose BLDC injini, kusanganisira ibwe pamwe muchina uye zvakazara kwangoitwa mutsetse zvakakwana. Zvichakadai, nesuwo gadzirisa vamwe vasiri mureza michina kuti tigutse zvido kuti vatengi zvinodiwa gwenya mukugadzira mumunda.
Strict yepamusoro kuzvidzora hurongwa, pamwe simba hwokugadzira chikwata unotipa kupa yakavimbika michina kuti vatengi vedu. Uzivi "Service, Profession, Kukurumidza, vechokwadi" anotibatsira kuhwina mutengi nyasha.
Nide-Zvinoitika nyore, ndiko kuedza kwete chete kuti injini mukugadzira nyore, mutengi nyore, asi kurova upenyu nyore ramangwana!
Yaiva Hengshan Qiao yevedza gwapa, Changzhou, Jiangsu dunhu, uye kufukidza imwe nzvimbo 15000 mativi metres, Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd iri nyanzvi Micro-injini (dzakatevedzana muchina, DC machine) armature kugadzirwa michina mukugadzira. Tinobudisa dungwerungwe izere armature Kugadzirwa kumira pamwe michina uye zvakazara kwangoitwa armature gungano mutsetse, akadai mugodhi kudzvanya muchina, kuputira mapepa kuisa muchina, armature ichitenderera muchina, achikanganisa kuisa muchina, commutator akakonzera kubatana kwe muchina, commutator akatendeukira muchina, armature vakadengezera muchina, armature kuvhenekwa panel, stator ichitenderera muchina, etc.
The zvigadzirwa kunyanya kushandisa imba midziyo yemagetsi, motokari, simba chokushandisa, etc. Mune armature kugadzira muchina munda, kambani yedu ndeimwe achitungamirira vagadziri muna China, uye successively paakavapa "Hi-Tech Enterprise" nehurumende.
Tiri zvinokambaira mberi ...
Agere yakaisvonaka yegungwa guta-Ningbo, achitora zvakanakira yepamusoro maindasitiri nomusimboti, wedzerai hwakakwana cheni uye yakakodzera zvokufambisa, uye kusanganisa chikwata nyanzvi dzomutambo gwenya kugadzira ruzivo, Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd chinotaura unokupai dzakasiyana orudzi injini kuurongwa vatengi vedu.
The zvigadzirwa zvinosanganisira commutator, bhora kubereka, mugodhi, carbon mumakwenzi, kuputira bepa, chafariz mudziviriri, magineti, kurudza gwenya pakavha uye lamination. Kunze zvigadzirwa izvi, nesuwo kupa basa injini mukugadzira zvekushandisa consultant, chirongwa rutsigiro uye mudzokere-kiyi chirongwa.
With emakore Zvakaitika injini kugadzira munda, tinonzwisisa zvikuru chii mutengi chaizvo kudiwa, chinokosha injini zvinoumba kugadzira mambure basa uye kunyatsoomerera yepamusoro kudzora mamiriro achititadzisa kupa mutengi hwedu unhu hwakanaka zvinhu panguva inonzwisisika mutengo, chinangwa chedu ndechokubatsira vatengi kuderedza Zvinorema sourcing kusungika apo tikwanise unhu hwakanaka zvigadzirwa.
Nide anoda ndiko kupa nyika kwazvo vatengi pamwe chete-vanorega basa injini mukugadzira. Ita injini, mutendeukire kuna Nide, zvose zvichava nyore!